Maitiro ekuisa Notepadqq pane yedu Gnu / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa Notepadqq pane yedu Gnu / Linux kugovera
Kazhinji, ese makodhi edhita ane vhezheni yeWindows, imwe vhezheni yeMacOS, uye imwe vhezheni yeGnu / Linux. Nekudaro, pane yakakurumbira kodhi mhariri pakati pevashandisi veWindows iyo isiri paGnu / Linux. Iyi kodhi mhariri inonzi Notepad ++. Zita rechirongwa ichi ratotitaurira kuti hachisi chinhu chinopfuura chinyorwa chevitaminized.
MuGnu / Linux isu tine Gedit, Kate kana Vim asi isu tinogona kuve nesarudzo yakafanana tichishandisa Notepadqq chishandiso. Notepadqq chishandiso chakavakirwa paNepepad ++ asi chakagadziriswa Gnu / Linux, ndiko kuti, kuti isu tinogona kuisa nekushandisa mune chero kupi kweGnu / Linux kugovera. Tevere isu tichaenda kukuudza maitiro ekuisa chishandiso ichi pane yako Gnu / Linux kugovera.
1 Kuiswa kuburikidza neSnap
2 Kuisirwa kuburikidza repository
3 Kuisirwa kuburikidza neAppImage package
4 Saka zvino?
Kuiswa kuburikidza neSnap
Notepadqq yakazara mune snap fomati, saka kana kugovera kwedu kuchienderana neichi chipakeji sisitimu, isu tinokwanisa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
sudo snap install notepadqq
Kuisirwa kuburikidza repository
Iyi sisitimu yakajairika asi ichiwedzera kuoma nekutenda kune iyo snap uye flatpak maturusi. Mune ino kesi, kana tichida kushandisa rekunze repositori kuisa notepadqq isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye nyora zvinotevera:
Iyi nzira yakajairika asi zvakare inoganhurirwa kune zvinogoverwa zvinovakirwa paDebian kana Ubuntu. Kana isiri yedu nyaya, saka isu tinofanirwa kushandisa inotevera nzira.
Kuisirwa kuburikidza neAppImage package
Notepadqq ine AppImage package. Rudzi rwemapakeji rwakafanana nesapapapakeji asi hazvitsamire pane chero software yekunze asi zvinoshanda chero mukuparadzirwazvisinei nemugove watinoshandisa. Tinogona kuwana pasuru iyi kubva kuNotepadqq kuburikidza Iyi link. Kana tango dhawunirodha pasuru yacho, tinya kaviri pasuru yakadzingwa uye application ichavhurwa.
Zvino tinogona shandisa iri yakapusa uye yakazara kodhi mhariri, kunyangwe tichifanira kutaura kuti vamwe vanyori vekodhi vakaita akaisa zvikomberedzo o atomu zviripo zvekuparadzirwa kweGnu / Linux uye zvinogona kuve zvakanyanyisa sarudzo kupfuura Notepadqq kana pamwe kwete?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Notepadqq pane yedu Gnu / Linux kugovera
kumisikidza kunokundikana… kubuda:
# apt-tora kuisa notepadqq
Kuverenga mapepa mapoka ... Akaitwa
Kuvaka muti unovimba
Kuverenga zvemashoko enyika ... Akaitwa
E: Haigone kutsvaga package notepadqq
Pindura kuna just4tr
Zvinoshamisa sei kuti ndakangozviedza uye hazvindipe chero kukanganisa, edza mushure mekuwedzera marekodhi ekuvhara chikamu uye woedza kuisa zvakare.
Dambudziko rine mabhureki neatomu nderekuti vanoshandisa elektroni, inova imwe yemarara makuru aripo
Dai vaive vakazvimiririra nema electron zvainge zvakanaka kwazvo, zvirinani zvakanyorwa muco c ++ ivo vaizove mhuka sezvo vaisazoshandisa yakawanda zvakadaro zviwanikwa.
Ini ndaisazozvimisikidza semarara asi muchikamu ndinobvumirana chaizvo uye zvaizosanganisira yekuona studio kodhi. Dambudziko neatomu nderekuti iri kushandiswa pazvinhu zvayisina kugadzirirwa kuita. Iri furemu rine node.js-based web server uye inoenderana mutengi. Iyo inonyanya kuitirwa kuti ikwanise nyore kuisa padandemutande kunyorera kune desktop desktop.
Mune izvi notepad ++ dzidziso Ndakawana imwe nzira yekuzviita. kana paine munhu anobatsira !!
chinyorwa chakanaka zvakadaro
DJ Mixxx 2.1: yakasarudzika sarudzo kune Virtual DJ
mps-youtube: Tamba YouTube zvemukati kubva kune iyo terminal